90 ° hasha richishanda
chisina kutsetseka kukodzera
Flat ndiro kukodzera
U kuumba kukodzera
Z chimiro richishanda
HaiYan Hama Hardware Co., Ltd. (HMSTRUT) yakavambwa muna 2002, riri mu HAIYAN County ---- muzinda the yangtze River Delta. We kufukidza imwe nzvimbo 27000 mativi metres, isu zvino tine vashandi 200, kusanganisira 16 mainjiniya, 46 mamaneja. Uyewo isu makasimbisa North America Service Center muCanada.
HMSTRUT ari nyanzvi mugadziri uye ekisipota kuti hanya pakutsvakurudza kukura uye kugadzirwa naro hurongwa. Huru zvigadzirwa ndiwo: mugero mupengo, mugero, gwara zvakakodzera, mutopota okusungisa, fastener uye zvichingodaro.
HMSTRUT anotevera mutemo mutengi ukuru, unhu-wokutanga uye kuchengeteka mune chinangwa pamusoro-sosaiti, dzichiri zvinogadzirwa itsva uye kuwedzera itsva munda. Our vakanyatsoshongedzwa zvivako uye yokuisvonaka masimba munyika mumatanho zvose okuwana kunotibatsira hunovimbisa totao vatengi kugutsikana. Kunze, takagamuchira ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE uye Ul.
HMSTRUT otora "UTIZIRO, kuvimbika, kushanda zvakanaka, KUZVITSAURIRA, Innovation, WIN-WIN" sezvo kambani tsika. Zvino zvinhu yedu zvikuru mune zvakasiyana-siyana yakasiyana pamusoro nyika, dzakadai Europe, America uye Japan.
Aiming kuva bhizimisi mutungamiriri kuisa hurongwa.
No.388 North Zhenzhong Road, Shendang Town, Haiyan City, Zhejiang dunhu, China 314311
Channel T Plate Fitting, General Fitting , Channel Fitting , chisina kutsetseka Fitting , Channel nut, Strut Channel Nut Without Spring,